Iindleko Zangempela Zolungiso | December 2021
Iindleko zokwakha idesika- Yimalini indawo oyitshintshayo kunye nokufaka idesika
Nokuba uzakhela ipakethe ngokwakho kwasekuqaleni, ufaka ipaki yegadi okanye ubeke enye, sidibanisa zonke iindleko eziza kuthatha ukugqiba lo msebenzi. Nantsi indlela yokwenza uhlahlo-lwabiwo mali lokufumana izinyuko, kunye nezinto zokulungisa kunye nokulungisa ezo zikhululo zomgangatho.
Iindleko zokuLungiswa kwamaGumbi okuPhila-Zingakanani iiRekhodi zeGumbi lokuPhila ngo-2018
Igumbi lokuhlala lelinye lamagumbi anexabiso eliphantsi endlwini yokulungisa. Nokuba wenza kwakhona iindonga, utshintsha iisilingi okanye wongeza unyango lwefestile, nantsi indlela onokugcina ngayo iindleko eziphakathi zokulungisa kwakhona igumbi lakho lokuhlala kwicala elisezantsi.
Ngaba ukulungiswa kwakho kuxabisekile?
Ukuba ucinga ngokulungiswa, kukho umbuzo omnye onokuthi ube phezulu kuluhlu lwakho: 'Ndiza kuchitha malini?' Ewe, impendulo, ixhomekeke.
Indleko zoLungiso lwangaphantsi-Zingakanani iiRekhodi zoLungiso kunye nokuGqibezela uMgangatho
Ukuguqula indawo engaphantsi engagqitywanga ibe yindawo enokuphila yeyona ndlela ingabizi kakhulu yokwandisa isiseko seenyawo zekhaya lakho-kunye nexabiso lekhaya lakho lilonke. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uqale uhlaziye igumbi lakho elingaphantsi, kubandakanya indleko eziphakathi, iingcebiso zoyilo olungaphantsi kunye nokunye.
Iindleko zoLungiso lweKhitshi- Yimalini ukuRekhisha kwakhona iKhitshi elitsha
Ikhitshi lelinye lamagumbi athandwa kakhulu ukulungiswa kwakhona, kodwa ikwayenye yezona zibiza kakhulu. Iitweaks ezincinci ziqala kwi- $ 4,000, kodwa ukulungiswa kungabhaluni ukuya kuthi ga ngaphezulu kwe- $ 100,000 ukuba zibandakanya ulwandiso olukhulu. Nantsi indlela ekuya kubiza ngayo ukulungisa ikhitshi lakho namhlanje.
Iindleko zokuhlaziya izindlu zangasese-Indlela yokuhlaziya igumbi lakho lokuhlambela kuhlahlo-lwabiwo mali
Igumbi lokuhlambela lelona gumbi libiza kakhulu ukulungisa kwakhona unyawo ngalunye. Nantsi yonke into oyifunayo malunga nendleko zokuhlaziya igumbi lokuhlambela, kubandakanya nokuba ungakanani kwakhona ukwenza into yakho engeloncedo, ishawa, ibhafu, kunye nokunye kuhlahlo-lwabiwo mali.
imidlalo yebhodi yolonwabo yeentsapho
Ngaba i-salvia inyamekile
Iintsapho zekrisimesi izimvo
Mint igumbi lokuhombisa eluhlaza